Fernando Torres Oo Qirtay Inuu Soo Taabtay Meeshii Ugu Hooseysay Ee Mustaqbalkiisa Ciyaareed. - jornalizem
Fernando Torres Oo Qirtay Inuu Soo Taabtay Meeshii Ugu Hooseysay Ee Mustaqbalkiisa Ciyaareed.
Fernando Torres ayaa qirtay inuu meeshii ugu hooseysay ee kubadiisa cagta uu gaaray ka dib markii uu muuq beelay xilli ciyaareedkii hore.
Isagoo ku dhibtoonayay inuu dib u helo qaab ciyaareedkiisii hore islamarkaana booska ka helo Chelsea bishii Febraayo, tababaraha Spain ayaa ka saaray ciyaaryahanka xulkiisa qaranka kulankii saaxiibtinimo e Venezuela.
Isagoo ahaa geesigii Spain u qaaday Euro 2008, islamarkaana Spain la qaaday koob adduun, waxa ay Torres ku aheyd arintaas niyad jab xoogan, sidoo kalena waxa ay aheyd dhiirogelin ah inuu fadhiga ka kaco.
Torres oo labo gool dhaliyay khamiistii kulanka Ireland ayaa yiri: “Del Bosque taleefan ayuu ii soo diray ka hor inta uusan iga soo tagin kulankii saaxiibtinimo ee Venezuela, si fiican ayaana u fahmay. Waxaan dhumiyay jaceylkii aan u qabay kubada cagta”.
“Waxaan joojiyay inaan tusaale u noqdo ciyaartoyda da’ yar, waana wax la ii soo baray inaan sameeyo markii aan joogay Atletico Madrid”.
“In xulka Spain la igu soo darro waxa ay ii noqotay wax iska caadi ah. Haatan waa sida abaalmarin oo kale”.
Afar bilood ka dib Torres waa uu ku soo laabtay xulkiisa, waxaana uu ku soo laabtay sidiisii hore.
Labadii gool ee khamiistii ee Gdansk ayaa tusaale u ah qaab ciyaareedkii lagu yaqiinay ciyaaryahanka ay Chelsea ka soo bixisay 50ka milyan ginni.
Torres, oo 28 jir ah ayaa yiri: “Waan ku faraxsanahay qaab ciyaareedkeyga shaqsiga ah, aad ayaana ugu faraxsanahay inaan goolal dhaliyay, lakiin waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay guushii aan gaarnay”.
“Kalsooni ayaan qabnaa haatan sababtoo ah waxaa daremeynaa inaan ka xoog badanahay sidii hore, sababtoo ah waxaan u ciyaarnay si wanaagsan. Waa inaan sidaan oo kale u sii ciyaarnaa”.